Wado Hadalo u Dhaxeeya Maraykanka iyo Cuba oo wali ka socda Havana – Radio Daljir
Maarso 22, 2016 2:22 b 0
Suuj, March, 22, 2016-(Daljir)_Mareykanka iyo Cuba, ayaa Waxaa u dhexeeya Weli kala aragti-duwanaan dhanka fikirka ah, iyadoo tani ay dibadda u soo baxday, kaddib kulan dhexmaray madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama oo booqasho ku jooga Havana iyo madaxweynaha Cuba, Raul Castro.
Qodobbada ay sida aadka ah uga kala aragti-duwan yihiin labadan Dal, ayaa waxaa ka mid ah; Dimuquraadiyadda iyo Xaquuqul Insaanka. Wuxuuna madaxweyne Obama sheegay in xiriirka u dhaxeeya labadooda dal uu gaari karo meel wanaagsan, haddii xukuumada Cuba ay horumarka ka sameyso dhinacyada siyaasadda iyo xaquuqul insaanka.
Madaxweynaha Xukuumadda Cuba, Raul Castro ayaa Dowladda Mareykanka ku eedeyay laba-wajiilenimo, wuxuuna si weyn ugu dhaliilay Mareykanka xayiraadda dhaqaale ee uu kusoo rogay dalkiisa, taasoo saarnayd muddo fog.
“Waxaad ii keentaa magacyada maxaabiista aad sheegaysaan inay siyaasad Cuba ugu Xir-xiran yihiin… Haddii aad keento – waxaa ballan ah inaan isla caawa xabsiga kasii dayno,” ayuu ka yiri madaxweynaha Raul Castro shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabateen isaga iyo madaxweyne Obama.
Sidoo kale, Raul Castro ayaa ka dalbaday Barakac Obama inuu gacanta Cuba kusoo celiyo saldhigga ciidanka Badda ee Guantanamo Bay, oo ku taalla Jasiiraddaas uuna Mareykanku u adeegsado xilligaan xabsi uu ku xiran dadka looga shakiyo in ay ka tirsan yihiin kooxaha Islaamiyiinta ah.
Barack Obama ayaa dhankiisa shirka jaraa’id ka sheegay in Cuba ay horumarro waa-weyn ka gaartay dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada, isagoo xusay in Mareykanka aysan ka aamusi doonin arrimaha Xuquuqda Aadanaha ee Cuba.
“Waxaa jira Farqi weyn oo inoo dhexeeya aniga iyo madaxweyne Castro, kaasoo ah inaan ku kala Aragti-duwanahay – Dimuqraadiyadda iyo Xuquuqda Aadanaha. Aniga iyo Castro waxaan yeellanay wada-hadalo ay daacadnimo ku dheehan tahay, kaasoo aan intiisa badan uga hadalnay arrimahan aan ku kala aragti-duwannahay,” ayuu hadalkiisa ku dara Obama.
Dhanka kale, Barack Obama ayaa xusay in dowladda Mareyknaku uu qirayo horumarka ay ku tallaabsatay Cuba, Laakiinse loo baahan yahay in is-bedello siyaasadeed ay la timaaddo Cuba, wuxuuse xusay in Mareykanka iyo dal kale uusan go’aan kama dambeys ah ka gaari karin mustaqbalka Cuba.
Somaliland oo Laga roob-dooney maanta